Jonga ezona binzana zibalaseleyo ze-instagram zobomi Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Jonga amabinzana amahle kwi-Instagram yobomi
NgoJanuwari 16, 2019 0 IiCententarios 847
Baninzi abantu abafuna umyalezo oza kubanceda phucula usuku lwakho kunye nenqanaba lakho lobomi, ke ukuba ungomnye waba bantu abathanda ukuphakamisa abanye ke le yinto enkulu kuwe.
Ukuba ufuna ukuba ngumhambisi olungileyo amabinzana e Instagram yobomi Ungasebenzisa bonke ubuchule bakho ukuba ube neakhawunti edume kakhulu, kufuneka ube nesimo sengqondo esakhayo kwaye ufuna ukukhuthaza abanye ngamagama ngalinye owenzayo.
Ukwenza amabinzana amahle kwi-Instagram yobomi?
Ngokwesiqhelo olu hlobo lwamabinzana zihlala zikhokelela ekuboniseni, yenza umsebenzisi azive ngathi akukho nto ibaluleke ngaphezu kokuzola nokuba nentembelo ebusweni beengxaki zobomi.
Ukuba nombulelo ngayo yonke into esiyinikwe bubomi yinto entle kakhulu ukuba sabelane ngayo kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunokwenza ngamabinzana kunye nemifanekiso ekhuthazayo kwaye ikhokelele kwinto enye. Ezi zihlala ziyimifanekiso yeendawo ezintle zomhlaba okanye izinto ezenziwe ngezandla.
Uninzi lwala mabinzana luphuma encwadini, kwingoma okanye kwisibonakaliso sakho, ngenxa yeso sizathu iinketho ofuna ukuzisebenzisa ziya kuxhomekeka kubuchule bakho.
Amabinzana anika ithemba ngobomi
Xa ubomi buye bundinika i-lemons ... Ndikhupha i-tequila!
Ukuzama nokusilela, kodwa EMVA kokungaphumeleli kumzamo
Ukwafunda ukuba iliso limamela ngaphambi kokujonga.
Into kuphela enokuthi ingenzeki yile esingazami ngayo.
Ubomi abuyongxaki engasonjululwanga, kodwa yinto yokwenyani.
Ukwenza imihla ibalwe endaweni yokubala iintsuku.
Ukuzithemba kuthetha ukuphelisa uloyiko ngokungeyomfuneko kwindlela yethu yobomi.
Awungekhe ukhethe ukuba uza kufa njani okanye nini, kodwa ungathatha isigqibo sokuba ufuna ukuhlala njani ngoku.
Ubomi bam nawe yinto endingenakuze ndiyitshintshe, nditsho kubo bonke ubutyebi obuphantsi kwezulu.
Ubomi buyaguquka xa butshintsha ...
Phila ubomi bakho kwaye ungahoyi ukungakhathali, ungavumeli mntu ukuba onwabe.
Phupha, phila kwaye enkosi imini yonke.
Ubomi ngokwabo yipati, ukonwaba kunye nomdaniso.
Unokuba nomdla Iinkampani zeefoto ze-Instagram.
Iziqendu zokubonisa ngobomi
Ubomi abukho ngokuzifumana ngokwakho, kodwa malunga nokuzidala- George Bernard Shaw
Bathi ithamsanqa livela ngokuhambelana nokubila kwakho. Okukhona ubila, uyakuba nethamsanqa- Ray Kroc
Into ozenzela yona iyanyamalala xa usifa. Into oyenzayo ukuze ushiye abanye yenza ilifa lakho- Kalu Ndukwe Kalu
Ubomi bulula kakhulu, kodwa sizama ukuba bube nzima - Confucius
Ubomi luhlobo lwebhayisekile. Ukuba ufuna ukugcina ibhalansi yakho, hamba phambili - Albert Einstein
Funda kwiimpazamo zabanye. Awuyi kuphila ixesha elide ukuzibophelela zonke- Groucho Marx
Ubomi bunokutshintsha, kodwa ukukhula kukukhetha. Yiba nobulumko ngokhetho lwakho - UKaren Kaiser Clark
Ubomi yintlekele kwabo baziva kuphela, kodwa umdlalo ohlekisayo kwabo bacinga- Horacio Walpole
Hlala ulambile. Hlala uphambene - Steve Jobs
Ukuba ungayiphupha ungayenza - Walt Disney
Amabinzana angaziwayo e-Instagram obomi
Indoda elumkileyo ayifundi kuphela kubafundisi bayo, kodwa nakwabafundi bayo.
Awunamaphupha, yiba nezinjongo.
Ubomi abukho malunga nokuqokelela iziqhamo ozivuna mihla le, kodwa malunga nembewu oyihlwayelayo.
Ngaphandle kobunzima, kobu bomi kuya kuhlala kukho ithuba lakho lokufumana impumelelo.
Ukuba ufuna ukuqhubeka, yeka ukufunda isahluko sokugqibela sobomi bakho uze uqalise ukubhala elilandelayo.
Khohlwa ngobomi obabucwangcile kwaye uqale ngokuphila into onayo phambi kwakho.
Ubomi buhle kwaye bumnandi ngokuchanekileyo kuba abunakulindelwa. Ukuba bekungenjalo, iya kuba ngwevu kwaye inesidima.
Kunokwenzeka ukuba uphile ngokukhuselekileyo xa wamkela ukuba uya kuba nobomi bokungazithembi kwaye uthathe isigqibo sokujamelana nazo.
Ulonwabo alucingwa, luyaphila.
Eyona nto ibaluleke kakhulu ayisiyimali yakho, kodwa lixesha lakho, ngoko ke musa ukuchitha ixesha elinye kubomi bakho.
Kobu bomi kukho into ebaluleke ngakumbi kunemali: ibizwa ngokuba yeyempilo.
Unakekele umzimba wakho, kodwa ungalibali ukukhathalela umphefumlo wakho.
Eyona ndlela yokuphila kukuhlala ujonge phambili kodwa ungazilibali izinto ebesizenza ngaphambili.
Ungazisoli nganto, kuba zonke ezo ziphoso zikwenze ukuba ungubani namhlanje.
Sinethemba lokuba la mabinzana anele ukuba ube nesiqalo esihle soshicilelo lwakho, khumbula ukuba ukhetho olukhulu kukusebenzisa amabinzana aphuma kuwe, aya kwenza iakhawunti yakho into eyahlukileyo ngakumbi kwaye iyakhuthaza.
Los abalandeli Baza kuza kwiakhawunti yakho ngokuzithemba okukhulu kwaye baya kufuna ukusebenzisa amabinzana akho njengomzekelo kubomi babo.
Ndwendwela ezo imigaqo yokuthumela kwi-Instagram.
1 Ukwenza amabinzana amahle kwi-Instagram yobomi?
1.1 Amabinzana anika ithemba ngobomi
1.2 Iziqendu zokubonisa ngobomi
1.3 Amabinzana angaziwayo e-Instagram obomi
NgoJanuwari 16, 2019
Ukulungele ukucula? Funda amabinzana amahle kwiingoma ze-Instagram
Jonga ukuba leliphi ibinzana le-Instagram ngesiNgesi ongalisebenzisa